Orlistat အမှုန့် (96829-58-2) hplc≥98% ထုတ်လုပ်သူ & စက်ရုံ
rating: SKU: 96829-58-2. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ ခွဲစိတ်မှုသို့မဟုတ်ဆေးဝါးစသည့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုတစ်ခါမှမပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကုထုံးအားလုံးသည်သင်သူတို့ကိုတည်ကြည်ပြီးနောက်မှလိုက်နာရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာမှသာထိရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပြုလုပ်သည့်အခါထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည်။
Orlistat သည် lipase inhibitor အနေဖြင့်ပြုမူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အစာမှအဆီများကိုစုပ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သောက်သောကယ်လိုရီပမာဏကိုလျော့နည်းစေသည်။ များစွာသောအခြားကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ Orlistat ထိုကဲ့သို့သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာကဲ့သို့သောအခြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများဒီပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ကပ်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်တပ်ရင်းသို့မူးယစ်ဆေးမပါဝင်ပါဘူးသောသူတို့ထက် ပို. နှစျခုမှသုံးကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်ကဖော်ပြတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုရရန် Orlistat အကျိုးကျေးဇူးများစွာအများအပြားရှိသော်လည်းအာရုံစူးစိုက်ရန် Orlistat ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိပါသည်။ ဤကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ steatorrhea ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အူသိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါဖြစ်သောအဆီပါသောချောင်မစင်များပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာများ, ကံကောင်းတာက, အချိန်နှင့်အတူလျော့နည်းသွားသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ Orlistat ယန္တရား
Orlistat သည်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွင်းဖြစ်သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုတားဆီးပိတ်ပင်ထားသည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း lipases များအတွက်ပြောင်းပြန် active- site ကို inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကရိယနှင့်အစာအိမ်အူအတွင်းရှိ lipases များရှိတက်ကြွသော serine site နှင့် covalent bond ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဟန့်တားခြင်းနှင့်အဆီမှ hydrolyzed နှင့်စုပ်ယူခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ (NCI04) ။
ပုံမှန်အစားအစာမစားမီ ၁၂၀ မီလီဂရမ်တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်သောက်ချိန်တွင် orlistat ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်ဆေးသည်အာဟာရအဆီ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မစုပ်ယူနိုင်အောင်တားဆီးပေးသည်။ ပို၍ ဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ပိုမိုအားကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမပေးပါ။
Orlistat သည်အမှုန့်အလုံးလေးများပါ ၀ င်ပြီး 120-mg အလေးချိန်ရှိသောစိမ်းမာသော Hard-gelatin တောင့်များဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်သုံးတောင့်သောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ သင်ဆေးပြားသုံးလုံးကိုတစ်ခေါက်သွားမသောက်သင့်ပါ။ သို့သော်အဆီပါသည့်အဓိကအစာပါသောစားပွဲတစ်ခုစီကိုမနက်စာအတွက်တစ်ခု၊ သင်ဆေးတိုင်းကိုအစာစားပြီးတစ်နာရီခန့်အကြာတွင်သောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အစာစားခြင်းကိုမကြာခဏလွဲချော်လျှင်သို့မဟုတ်သင်၏အစာတွင်အဆီမပါဝင်ပါက Orlistat ဆေးကိုချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။ အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးပမာဏထက်ကျော်လွန်သောဆေးများသည်နောက်ထပ်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှမရရှိနိုင်ပါ။
Orlistat သည်အချို့သောအဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့်ဗီတာမင်များနှင့် beta-carotene တို့၏စုပ်ယူမှုကိုလျော့ချရာတွင်ထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဆေးကိုသောက်သုံးသူများသည်အဟာရလုံလောက်သောအာဟာရဖြစ်စေရန်အဆီပျော်ဝင်သည့်ဗီတာမင်များပါ ၀ င်သည့်ဗီတာမင်မျိုးစုံနှင့်အတူသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ Orlistat မသောက်မီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်အနည်းဆုံးနှစ်နာရီကြာလျှင်ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်ရန်အကြံပြုသည်။
၎င်းသည်အသည်းသို့အသည်းစီးဆင်းမှုကိုတားစီးသည့်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ orlistat ကိုအသည်းထိခိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အစီရင်ခံစာများစွာရှိပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်များတွင်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဆေးညွှန်းအောက်တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
အထူးသဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည့်အခြားဆေးများကိုသင်သောက်နေလျှင်သင့်ဆရာဝန်အားအကြောင်းကြားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောဆေးဝါးများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာစေနိုင်သည်။ ဥပမာ orlistat သည်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးကုသမှုအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးယန္တရားကိုအမြဲတမ်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်။
ထိုကဲ့သို့သောရောဂါများသည်ရှားပါးသော်လည်းအသည်းပြproblemsနာအချို့သို့မဟုတ်မြင့်မားစွာသောက်သုံးသောအခါဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် FDA သည် orlistat တံဆိပ်များတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးချက်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်အသည်းဒဏ်ရာဖြစ်နိုင်ခြေကိုညွှန်ပြသည်။
အခြားနည်းသောအခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာစိုးရိမ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကယ်၍ သင်သည်စူးရှသောရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့ရပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါသို့မဟုတ် FDA အစီရင်ခံခြင်းအစီအစဉ်သို့သတင်းပို့သင့်သည်။